भान्सामा हम्मेसी नटुट्ने कुरा हो प्याज । प्याज आफैमा तरकारी होइन तर लगभग सबै जसो तरकारीमा प्याज नभइ हुदैन । यहि प्याजले भाउ बढेर कहिले हामीलाई तनाव दिन्छ भने कहिले खाएर सास गनाएर अर्को तनाव थपिदिन्छ तर पनि हाम्रो भान्सामा प्याज कहिलै टुट्दैन । आखिर किन त ? कहिले विचार गर्नु भएको छ ?
प्याजलाई गनाउँने भनेर खाइएन भने धेरै कुरा पाउँनबाट छुटिन्छ । आज हामीले यहाँ गनाउँने प्याजका गुणकारी फाइदाहरु बारेमा लेखेका छौँ । तपाईलाई उपयोगी हुनेछ ।
प्याज तरकारीमा मसलाको रूपमा प्रयोग गरिने मसला फल हो । यो प्रायः सबै ठाउँमा उत्पादन हुन्छन् । हामीले हाम्रो सब्जी स्वास्दिलो बनाउन ब्याज जरुरि हुन्छ । सबैको भान्सा कोठामा प्याज हुन्छ ।
Don't Miss it शाकाहारी बनेँ रोग र मृत्युदर कम हुन्छ, यति कुरा याद गर्नुहोस्